Naayjeeriyatti jiraattonni gandaa nama shorbaa hate jedhan jiraa gubanii ajjeesan - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Siyaasa Addunyaa Naayjeeriyatti jiraattonni gandaa nama shorbaa hate jedhan jiraa gubanii ajjeesan
Namoonni sadi fooliin shorbaa gandaa ganamaan nujeeqe jedhan gara mana shorbaan keessaa urgaayuutti qajeelan. Mana shorbaan keessatti qophaayaa ture seenuudhaan ibidda irraa shorbaa fudhatanii bayan. Haati shorbaa iyya ‘qabaa, qabaa, qabaa’ gadi lakkifte. Ollaan iyya dhagaye hattoota shorbaa sadeen ari’utti ka’an. Hattonni shorbaa lama miliqana. Inni shorbaa baadhatte eessayyuu gayuu hindandeenne.
Worri ollaa hatticha qaban yeroo hinlaanneef; battalumatti dhagaa, sibiilaafi waan harkaa qaban hunda irra kaayuu eegalan. Hedduu namootaa sun kophaa isaatti kan aarii isaanii tasgabbeessu hinturre. Hattichi lubbuun osoo jiru ibidda itti qabudhaan foon, lafeefi lubbuu isaa gargar baasan.
Poolisiin naannoo shakkamaa seeratti dhiyeessuu dhiisanii ufumaa tankaarfii hamaa iratti fudhachun sirrii aka hintaane dubbate. Jaarmayaaleen mirga namaaf falmanis gocha kana balaaleffataniiru.
Naayjeeriyaafi biyyoota Afrikaa tokko tokko keessatti nama waa hate jedhamu irratti jiraattonni gandaa tankaarfii cimaa akkanaa darbaa darbaa kan fudhatan ta’uun gabaafamera.
seera harka ufiitti galfachuu
Previous articleGalatee Burqaa fiigicha Beejiingitti geggeeffameen injifannoo gonfatte
Next articleGanzabee Dibaabaa mt 1500’n shaampiyoonaa addunyaa taate